NIVOAKA NY DIDY FAMPISAMBORANA : Tafaporitsaka any Sina i Riana Andriamandavy VII | NewsMada
NIVOAKA NY DIDY FAMPISAMBORANA : Tafaporitsaka any Sina i Riana Andriamandavy VII
Tafatsoaka any Guanzouh Sina ny loholona Andriamandavy VII.
Nivoaka ny “didy fampisamborana” ny loholona Riana Andriamandavy VII, notanterahin’ny tonia mpampanoa lalàna ambony eo anivon’ny Fitsarana. Anisan’ny vesatra nanenjehana azy ireo “heloka bevava” nataony. Tafaporitsaka any Sina anefa, ny tenany. Nadio tokoa ny rano nitana…
Anisan’ny enjehina eny anivon’ny Fitsarana, amin’izao fotoana izao, ny loholona Riana Andriamandavy VII. Raha ny loharanom-baovao, nisy ny didy fampisamborana navoakan’ny tonia mpampanoa lalàna ambony avy eny anivon’ny Fitsarana Anosy. Antony anenjehana azy, ny fidirany lalina amin’ny tranga manjo an-dRazaimamonjy Claudine, izay mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena. Ity mpanolotsaina ity, izay voasaringotra amin’ny raharaha kolikoly avo lenta ary tokony ho nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora, saingy mbola tazomina eny amin’ny hopitaly, hatramin’izao. Anisan’ny fiampangana ity lehiben’ny Faritra, Matsiatra Ambony, teo aloha ity, ny « heloka bevava ». Noho izany, ny dingana arahina amin’ny pitsopitsony dia tsy mila fanesorana amin’ny maha tsimatimanota azy eo anivon’ny Antenimierandoholona. Araka izany, ny Tonia mpampanoa lalàna ambony eo anivon’ny Fitsarana no mamoaka ity didy fampisamborana ity. Vokatr’ireny zava-miseho notanterahin’ny loholona Andriamandavy VII, teny amin’ny Bianco, nandritra ny famotorana natao an-dRazaimamonjy Claudine teny an-toerana. Mbola izy koa no niray tsikomba nandritra ireny fitsoahana namboamboarina tatsy amin’ny Nosy rahavavy Maorisy ireny. Ankoatra izay, nisy ny fitoriana notontosain’ny teo anivon’ny Sendikàn’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) vokatry ny fanambaniana sy ny fanaovana fanalam-baraka ary famerezana ny hasin’ny mpitsara noho ny teny tsy voahevitra.
Raha tsiahivina, nisy ny fihetsika tsy mendrika nataon’ny loholona, Riana Andriamandavy VII, nitoratoraka ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ity na ny Bianco, nandritra ny famotorana natao an-dRazaimamonjy Claudine, tamin’ny raharaha fanodinkodinana volam-panjakana ireny. Ny ampitson’io, mbola niverina teny an-toerana ny tenany niaraka tamin’ireo “mpikaramanady” ary nanakorontana teo amin’ny vavahady. Mbola ny anarany hatrany no fantatra sy re ary niray tsikomba tamin-dRazaimamonjy Claudine nandritra ireny filazana fa fitsaboana azy tany Maorisy. Sokajiana ho heloka bevava koa ny saika fidirana an-keriny notanterahin’ity loholona ity, tetsy amin’ny Fitsarana mijirika ny kolikoly (CPAC) tetsy 67ha nandritra ny raharaha nandeha teny an-toerana. Ireo heloka notanterahiny ireo, araka izany, anisan’ny mahatonga azy tsy ho afa-bela amin’izao famoahana didy fampisamborana azy izao. Vesatra mbola anenjehana an’ity olom-boafidy, eo anivon’ny Antenimierandoholona ity koa, ny fanakanana ny mpitsara, izay nahazo alalana hitsidika io olona voarohirohy amin’ny resaka kolikoly, tsaboina etsy amin’ny HJRA io. Sokajiana ho voafonja marary tsaboina etsy amin’ny hopitaly anefa izy io.
Anisan’ireo raharaha be mpanaraka tokoa ny momba ity Senatera, Andriamandavy Riana ity nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoan’ny Antenimierandoholona, ny herinandro teo. Miakatra, araka izany, ny hafanana eo amin’ity raharaha maha voasaringotra an’ity loholona ity. Misy hatrany ny mampitaha ny raharaha, momba ny nanenjehana ny loholona Lylison René de Rolland, izay iharan’ny didy fampisamborana koa, noho ny fiantsoana tanàna maty teto Antananarivo. Somary niala bala kosa, ny filohan’ny Antenimierandoholona, nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana, raha nanontaniana mahakasika ireo raharaha ireo, ny herinandro lasa iny. Nodiany tsy hita tahaka ny tonom-bomanga vory vahoaka ireo raharaha ireo, na eo aza ny fahafantarana fa havanana amin’ny resaka lalàna ny filohan’ny Antenimierandoholona.
Afa-nitsoaka any Sina
Raha ny loharanom-baovao, efa nandeha teny anivon’ny zandarimaria ny antontan-taratasy sy ny famotorana savaranonando tokony hanenjehana ny loholona Riana Andriamandavy VII. Ny fantatra anefa, efa niainga teny anivon’ny Fiadanana teny ity raharaha ity, mialoha ny nandefasana azy teny amin’ny Borigadin’ny Tana ville Betongolo. Raha ny marina, ny zoma teo no tokony ho nanatanterahana ny fisamborana, saingy tsy nisy ny tena fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana. Vokatr’izay fitavozavozana izay, tafaporitsaka afa-nitsoaka any Guanzouh Sina, omaly maraina tamin’ny 9 ora, ity loholona ity, nandray fiaramanidina tetsy Ivato. Votsotra sy nitsoaka ny raharaha tokony hanenjehana azy, araka izany, Riana Andriamandavy VII. Mampiahiahy koa ny tsy fivoahana araka ny tokony ho izy ny fandrarana tsy hivoaka an’i Madagasikara amin’ity loholona ity. Ho sanatria ve ho vitavita ho azy koa izao raharaha izao?
Une réponse à "NIVOAKA NY DIDY FAMPISAMBORANA : Tafaporitsaka any Sina i Riana Andriamandavy VII"
Rakotoarisoa Mmainiaina N 09/05/2017 à 09:41
Efa nampoizina ihany io e!Ary nampoizina ihany koa ny fihetsiky ny fanjakana fa sadasada ny fandraisany ny andraikitra.Mbola ho ela ny fampanjakana ny fahamarinana eto @tsika.Mirary soa tompoko